गर्भनिरोधक औषधी खाँदा महिलाको तौल बढ्छ ? – समावेशी
गर्भनिरोधक औषधी खाँदा महिलाको तौल बढ्छ ?
आइतबार, पौष २९, २०७५ | १:३२:०४ |
विशेषगरी महिला अनावश्यक गर्भबाट रोक्नका लागि पिल्स खान्छन् । लगातार इमर्जेन्सी पिल्स खाएपछि महिला आफूमा परिवर्तन महसुस गर्छन् । यसमा अचानक तौल बढ्नु पनि एक हो । महिलाका लागि योभन्दा ठूलो कुरा के होला । त्यसो भए के पिल्सले तपाईंको तौलमा वृद्धि गरिरहेको छ ?
यसबारे भारतकी डाक्टर अनुराधा शर्माले जानकारी दिएकी छिन् । उनी फोर्टिस अस्पताल, मुम्बईमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन् । उनी भन्छिन्ः‘हो, धेरै महिलाले यही प्रश्न मलाई सोध्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ कि गर्भनिरोधक पिल्स खाँदा उनीहरुको तौल बढ्छ र यसको बिकल्पमा के गर्ने ।
जब तपाईं पहिलो पटक यो पिल्स खान सुरु गर्नुहुन्छ तब तपाईंको शरिरमा केही हर्मोनल परिवर्तन हुन्छन् जस्तै तपाईंको स्तन संवेदनशील हुन्छन् र ती सुन्निन्छन् । यो स्तनको तन्तुमा परिवर्तनका कारण हुन्छ जसका कारण तन्तुमा वाटर रिटेन्शन हुन्छ र तपाईंको स्तनको आकारमा वृद्धि हुन्छ । यसलाई महिलाले तौल बढेको सम्झन्छन् ।’त्यसकारण महिलाले तौल बढ्छ भनेर गर्भ निरोधक औषधी खान डराइरहेका छन् भने ढुक्क हुनुहोस् ।